ब्रेकअपपछि नम्रताको प्रष्टीकरण : जहिलेसम्म कम्फर्टेबल थियौं, सँगै थियौं ! – Sandesh Press
ब्रेकअपपछि नम्रताको प्रष्टीकरण : जहिलेसम्म कम्फर्टेबल थियौं, सँगै थियौं !
November 21, 2021 100
काठमाडौं । अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ र प्रेमी दावा स्टिभन शेर्पाको चारवर्षदेखिको रिलेसनसिप टुंगिएको छ । यी दुबैले सहमतीमै अलग भएर अघि बढ्ने निधो गरेका छन् ।
उनीहरुको ब्रेकअप केही महिना पहिले नै भैसकेको नम्रता निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘जहिलेसम्म हामी एकअर्कामा कम्फर्टेबल थियौं, हामी सँगै थियौं’ नम्रतालाई उध्दृत गर्दैै स्रोतले भन्यो, ‘कम्फर्टेबल नभएपछि हामी अलग भएका छौं ।’
पर्यटन व्यवसायी समेत रहेका शेर्पा र नम्रता पहिलोपटक एक फिल्मको प्रिमियर समारोहको बेला कुमारी हलमा सँगै देखिएका थिए । त्यसपछि नै उनीहरुले आफ्नो प्रेमलाई सार्वजनिकरुपमा प्रस्तुत गरिरहेका थिए ।
त्यसयता उनीहरु घुमघाम गर्न न्यूजिल्यान्ड र सगरमाथा आधार शिविरसम्म पुगे । चाँडै बिहे गर्ने उनीहरुको योजना पनि थियो । तर, आफूहरु सम्बन्धमा नरहेको कुरा स्वयम नम्रताले निकट साथीहरुलाई बताउन थालेकी छिन् ।
यसअघि सामाजिक संजालमा समेत दावा र नम्रताले घुमघाम र सँगै भएका तस्बिर पनि पोस्ट गर्दै आएका थिए । तर, यो गर्न पनि छाडेपछि उनीहरुको सम्बन्धलाई लिएर अड्कलबाजी भैरहेको थियो ।काठमाडौं । अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ र प्रेमी दावा स्टिभन शेर्पाको चारवर्षदेखिको रिलेसनसिप टुंगिएको छ । यी दुबैले सहमतीमै अलग भएर अघि बढ्ने निधो गरेका छन् ।
यसअघि सामाजिक संजालमा समेत दावा र नम्रताले घुमघाम र सँगै भएका तस्बिर पनि पोस्ट गर्दै आएका थिए । तर, यो गर्न पनि छाडेपछि उनीहरुको सम्बन्धलाई लिएर अड्कलबाजी भैरहेको थियो ।
Prevअप्रेसनपछि गम्भीर अवस्थामा अनिता, ट्युब बन्द भए सासै रोकिन्छ भन्दै बिनोद र छोरी भाबुक भए (भिडियो सहित)
महिलाहरुले रातको समयमा गर्दै नगर्नुहोस् यी काम, परिवारमा आउँछ अशान्ति
भूपू गोर्खालाई समान होइन, भारतले भन्दा १४० प्रतिशत बढी पेन्सन दिन्छौं : बेलायत